Jooji Dhisida Barnaamijka Crappy - Barnaamijka Isku-dhafan ee Weli wuu guuleystaa | Martech Zone
Talaado, September 25, 2012 Talaado, September 25, 2012 Chris Lucas
Halkan waxaa ku yaal wax CIO-ga gudaha ah oo kooxahaaga tiknoolajiyada gudaha ahi aysan rabin inaad ogaato, hirgelinta barnaamijka softiweerka ah ee 18-ka ah oo kugu kacaya $ 500K - $ 1MM waxaa lagu sameyn karaa cadaab wax badan ka jaban… waana inay ahaataa. Waxay dhisayaan amniga shaqada maxaa yeelay inta badan hoggaamiyeyaasha heerka-C iyo suuqleyntu ma fahmin sida tikniyoolajiyadu u shaqeyn karto iyo inay tahay inay shaqeyso.
Sida suuqleyda waxaan dhamaanteen dooneynaa barnaamijka u dhigma ee unicorn. Kan sameeya jiilka led, Abuuritaanka nuxurka, dhibcaha hogaanka, hagaajinta beddelaadda… oh, haa, oo wuxuu leeyahay a Analytics lakabka dushiisa Iyo, sida suuqleyda iyo tikniyoolajiyadda, waxaan dooneynaa inaan dhisno softiweer maxaa yeelay waxaan ku qanacsanahay inaanan heli karin waxa aan u baahanahay. Xaqiiqda, si kastaba ha noqotee, waa inaan heli karno ku dhowaad 90% waxa aan u baahanahay haddii aan joojinno raadinta unicorn-ka qaali ah, "xalal" ka qiimo badan oo aan bilaabi doonno inaan eegno barnaamijyada isku dhafan ee websaydhka qayb ka mid ah kharashka.
Marka maxaad raadineysaa markaad fulineyso barnaamijyada isku dhafan ee shabakadaha? Waa kuwan saddexda shay ee ugu sarreeya ee ay tahay inaad raadiso:
1) Isdhexgal Si Xor Ah
Haddii aad fiirineysid bixiyeyaasha adeegga emaylka, softiweerka xisaabinta, ama wax kasta oo u dhexeeya, waa inaad raadsataa adeeg is-dhexgal xor ah leh. Sababta Sababtoo ah waxay ka dhigan tahay in adeeggu kuu oggolaan doono inaad u isticmaasho xogtaada sida aad rabto. Sirta adeegsiga adeeg waliba waa fahamka in hal mowduuc - xog adigu iska leedahay, ee uusan ahayn adeegga. Shirkad doonaysa inay ku dhex milmaan adeegyo tiro badan ayaa fahamsan tan oo markaa ka dhigaysa adeegsiga adeegyadooda mid aad u fudud.
2) API furan
Xitaa haddii aadan horumariye ahayn oo aadan waligaa maqal furitaan API waa inaad raadisaa adeegyo leh API-yo furan. Sababta ayaa ah mid fudud, API-yada ayaa u oggolaanaya qof walba inuu ku dhiso adeegyada iyo alaabada dusha sare ee barnaamijkooda. Maxay tani muhiim u tahay? Hal sabab weyn ayaa ah inay u oggolaato adeegsiga hal-abuurka ah ee barnaamijka aasaasiga ah. Qof kastaa wuu imaan karaa oo dhisi karaa adeeg waxtar leh oo laga yaabo inuu xiro god ama uu ku siiyo fursad dheeri ah. Sababta kale ee ugu weyn ayaa ah ADIGA ayaa wax ka dhisi kara dushiisa. Xusuusnow unicorn-ka aan horay uga hadlay? Haddii adiga ama ilaha horumariyaha aad leedahay googoyn farsamo, waxaad ku dhismi kartaa dusha sare ee barnaamijka, ama waxaad u adeegsan kartaa xogta qaab aad rabto. Open APIss waxay siisaa horumariyaha qaab ay ku shaqeyso mana kaa dhigeyso inaad dhisto ama dib u dhisto adeeg.
3) Bulsho firfircoon
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu cajaa'ibka badan ee aan ku arkey ka shaqeynta warshadani waa sida shirkadaha / barnaamijyada qaata fikradda isku dhafka ay u leeyihiin saldhig caafimaad oo firfircoon, firfircoon, oo firfircoon. Haa, qaar baa ka firfircoon kuwa kale, laakiin shirkadaha badankood ee qaata fikradda isku xirnaanta waxay leeyihiin saldhig isticmaale oo doonaya inuu isku xirnaado. Maxay muhiim u tahay in la helo barnaamijyo leh jawi bulsho? Sababtoo ah barnaamijyada badankood ee leh tan sidoo kale waxay ku sii daayaan barnaamijkooda, dhagaystaan ​​jawaab celinta macaamiisha, guud ahaanna waxay leeyihiin dhiirigelinno ay ku sii wadaan sii wadista iyo kobcinta saldhigga isticmaalaha. Qaar badan oo ka mid ah barnaamijyadooda fadhiidka ah ayaa joojiya isugeynta ama kaliya hal mar ama laba jeer sanadkii. Waxaad dooneysaa inaad heshid barnaamijyo si joogto ah u hagaajinaya oo sii deynaya isdhexgalka cusub, sidaas darteedna kuu furaya fursado badan.
Kuwani maahan waxyaabaha kaliya ee la raadiyo laakiin qibradeyda waa calaamado aad u sheegaya app wanaagsan. Barnaamijyada isku dhafan ayaa kaa caawin kara inaad badbaadiso waqti, lacag, iyo madax xanuun. Raadinta inaad dhisto unicorn waa nacas nacasnimo, gaar ahaan markaad heli karto dhowr barnaamijyo isku dhafan oo isku dhafan oo xallinaya inta badan baahiyahaaga.
Noo soo sheeg waxa ka mid ah barnaamijyadooda isku dhafan ee aad ugu jeceshahay inay ka hooseeyaan.
Chris waa kuxigeenka Madaxa Horumarinta Ganacsiga Qalabaynta. Wuxuu maareeyaa dadaallo badan oo suuqgeynta ah ee 'Formstack' isagoo dano gaar ah ka leh sidii loo ogaan lahaa sida suuq-geynta bulshada iyo khadka tooska ah ay gacan uga geysan karto koritaanka Formstack. Formstack waa aalad qaab dhismeedka qaab dhismeedka khadka tooska ah oo madax xanuun badan ka qaata ururinta iyo maaraynta xogta qadka.
Mobilada iyo Iibintaada Supercharged Force
Sep 25, 2012 at 9: 16 PM
Marwalba waan layaabayaa xigashooyinka iyo waqtiyada ay macaamiisheenu mararka qaar siiyaan kooxdooda IT-da ee mashaariicda qaar. Kama dhihi kartid si ka wanaagsan… software lagu kalsoonaan karo, amaan ah oo adag ayaa ka fudud sidii hore in la horumariyo.